Kedu ihe na-agafe gị? | Martech Zone
Nyaahụ ka mụ na ezigbo enyi m, bụ́ Bill, na-eri nri ehihie. Dika anyi riri ofe tortilla ofe anyi Tylọ ụlọ ahịa Scotty, Mụ na Bill kwurịtara okwu n'oge ahụ na-adịghị mma ebe ọdịda na-aghọ ihe ịga nke ọma. Echere m na ndị nwere ọgụgụ isi n'ezie nwere ike iji anya nke uche hụ ihe egwu na ụgwọ ọrụ ma mee ihe kwekọrọ na ya. Ha na-awụli elu na ohere, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ihe egwu adịghị agabiga ... ọ na - edugakarị na ihe ịga nke ọma ha.
Ọ bụrụ na atụfuo m, nọgidenụ m. Lee ihe atụ….
Alọ ọrụ A amalite ngwa dị mfe nke na-arụ ọrụ, mana enweghị atụmatụ niile dị mkpa maka oge mbụ. Mgbe ohere bilitere iji gaa isi megide asọmpi ahụ, Companylọ ọrụ A na-atụ anya atụmanya ma chọpụta usoro iheomume na-eme ihe ike iji mepụta atụmatụ ndị fọdụrụ dị mkpa iji mezue nkwekọrịta ahụ. Ka ọ dị ugbu a, na-enweghị azịza ya, ha maba n’ime mkparịta ụka ahụ ma were ire ya.
Blọ ọrụ B na-ahụ ohere ahụ, mana ọ maara na ọ nweghị ike iru ihe achọrọ maka arịrịọ ahụ, n'ihi ya, ha ji nwayọ na-ada ma na-aga n'ihu n'ihu na atụmatụ ha maka izu oke na nchịkwa ụwa.
Kedu ụlọ ọrụ ziri ezi? Companylọ ọrụ A na-ewere oke ihe egwu yana nkwekọrịta yana onye ahịa ya. Ha na-etinye aha ha n'ihe ize ndụ na ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, enwere ike ịnwe ezigbo ohere na ha ga-arụ ọtụtụ ọrụ ma ọ bụghị ha niile. Companylọ ọrụ B anaghịdị aga na tebụl, na eziokwu ahụ bụ na ha enwetaghị nkwekọrịta ahụ nwere ike itinye ha n'okpuru ụlọ ọrụ A mgbe emechara ya.
N'oge gara aga, onye na-ahụ maka mgbanwe na-agbanwe agbanwe na m ga-enweta ụlọ ọrụ A ma agaghị m enwe nkwanye ùgwù maka ha na-ekwe nkwa ma na-enyefe. Ma oge agbanweela, ọ bụghị ya? Dị ka ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, anyị na-agbasaghị na-agbaghara ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike ịme ka oge na-aga ma ọ bụ na-abịa dị mkpụmkpụ na atụmatụ. Anyị na-eji ihe anyị nwere eme ihe.
IMHO, Company B anaghị enwe ohere n'oge a. M na-amalite ikwere ikike na-na ire n'oge na-agbanwe na mmepụta bụ ihe na-aga ime ka ị ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na enwere ohere ị ga-aga nke ọma, ị ga-anwale mgbe niile. Ma ọ bụghị ya, ohere ahụ ga-agabiga gị.
Nke a bụ eziokwu na ọrụ, nke a bụ eziokwu na nkwekọrịta, ọ bụkwa eziokwu na azụmaahịa. Ọ bụrụ n ’ichere chepụta mkpọsa zuru oke, ị gaghị enwe ohere ịmalite ya. Ebe ahụ is ihe kwesịrị ekwesị dị n'etiti izu okè na ọsọ. Ọ bụrụ n’inwere ike ịnapụta obere, ma napụta ya ọtụtụ mgbe, ị ga-azụ ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na m ga-atụnyere, m ga-ewere ihe doro anya, Apple na Microsoft. Vista bụ nnukwu ntọhapụ afọ na nchere. Leopard, n'aka nke ọzọ (nke m nyere iwu tupu ụnyaahụ) yiri ka ọ bụ nnukwu njirimara-ọgaranya nkwalite OSX. Microsoft weputara XBox 360, igwe eji egwu igwe eji ekwu okwu nke otutu ihe na otutu. Microsoft weputara Zune, ihe nlere nke oma nke oma nke n’egosiputa ahia. Ka ọ dịgodị, Apple na-ebupụta iPod, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Nano ọhụrụ, Mac Mini, Ngosipụta Cinema, Appletv, iPhone, iPods acha, iPod Touch, iMac, OSX Leopard… na-amalite ịhụ ihe na-eme?
Microsoft nwere oke, nwayọ nwayọ na-emighị emi yana nnukwu nnukwu ala. Apple enweela ihe ịma aka ha, mana tupu Apple enwee ike ịza ajụjụ ma ọ bụ mee ihere ogologo oge, ha malitere ihe ọhụrụ. Apple anaghị eme ya otu afọ dịka Microsoft na-eme, ha na-akọ akụkọ asịrị ebe a ma ọ bụ ebe ahụ wee malite. Ọ na-adịkwa ka ha na-ebupụta kwa izu! Ndị mmadụ na-agbaghara adịghị ike nke ụdị mbụ (ụgwọ na mma) ma ha na-eji obi ụtọ aga na nke atọ na nke anọ. Oge nlebara anya anyị dị mkpumkpu ma Apple na-eji ya eme ihe.
Kedu ihe ị na-ahapụ ka ị gafere gị? Kwụsị ichere ka ihe zuru oke ịwụnye. Maba n'ime taa ma ọ bụ lelee ohere ị gafere. Ọ bụ naanị gị ka azụmahịa gị ga-aga nke ọma.
Mara: offọdụ nkọwa m na Apple sitere n'ike mmụọ nsọ nke a nnukwu post na ihe ịga nke ọma Apple na Daring Fireball.
Tags: nhọpụtaoru ntinyekaadịKaadi ekeresimesiimirikitigoogle tinyere infographicgoogle tinyere ọnụ ọgụgụezumike kaadịoge ezumikeIndiajonathan salem baskinnhazi ogenhazi oge n'ịntanetịchedtọibe edokọbaran'elu mmanya
Ọkt 25, 2007 na 3:05 PM
Companylọ ọrụ A nwere ụzọ ziri ezi. Okwu a "Ọ ka mma ịbụ 80% taa karịa 100% karịa echi" abụbeghị eziokwu karịa taa. Ihe na-arịwanye elu na-arịwanye elu nke ihe na-eme n'achụmnta ego na-aga n'ihu na-eju m anya.